Klinefelter's Syndrome () - Hello Sayarwon
Klinefelter’s Syndrome ()
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Klinefelter’s Syndrome ()
Klinefelter's Syndrome () ကဘာလဲ။
Klinefelter’s Syndrome ကဘာလဲ။
Klinefelter’s syndrome ဆိုသည်မှာ အမျိုးသားများ ဖြစ် သော မျိုးရိုးလိုက်သော ရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဖွံ့ဖြိုးမှု၏ အဆင့်တိုင်းတွင် ထိခိုက်စေပါသည်။ ခန္ဓါကိုယ်၊ ဘာသာစကား နှင့် လူမှုဆက်ဆံရေး စသည်တို့ ဖြစ်သည်။ ပုံ မှန် အမျိုးသား လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝိသေသများ မဖွံဖြိုးပါ။
Klinefelter’s Syndrome က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Klinefelter’s syndrome သည် အမျိုးသား အယောက် ၄၀၀ တွင် ၁ယောက်မှ အယောက် ၁၀၀၀ တွင် ၁ယောက် အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Klinefelter’s Syndrome ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် များနှင့် အမျိုးသားများတွင် ခန္ဓါ ကိုယ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ခြေ၊ လက်များ ရှည်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည် အခြား ကောင်လေးများထက် ကြွက်သား ဖွံဖြိုးမှု နည်းနိုင်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို ဖော်ပြရာတွင် ပြဿနာများ ရှိခြင်း၊ ရှက်တက်ခြင်း၊ လူမှု အဖွဲ့တစ်ခု၏ တစ် စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်ရန် ပြဿနာရှိခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အမျိုးသားများသည် သုတ်ကောင် အရေအတွက် ကျခြင်း သို့မဟုတ် သုတ်ကောင် မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မျိုးမ အောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝှေးစေ့များသည် သေးငယ်ပြီး တင်း မာသည်။ အချို့အမျိုးသားများတွင် အမျိုးသမီး များကဲ့သို့ ရင်သားဖွံ့ဖြိုးခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။
အမျိုးသားများသည် လိင်အင်္ဂါတောင့်တင်းရန် ခက်ခဲခြင်း၊ လိင်တံ သေးခြင်း၊ မုတ်ဆိတ်ပေါက်မှု နည်းခြင်း၊ ချိုင်းမွေး နှင့် ဆီးခုံမွေးနည်းခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ရောဂါလက္ခဏာများသည် ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ထိုရော ဂါသည် အရိုးပွခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ် နိုင်ချေကိုလည်း မြင့်စေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်ရည်ကိုယ် သွေး ဆိုင်ရာ ရောဂါများ ဖြစ်နိုင်သည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြမထားသော အခြားလက္ခဏာများ လည်းရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင့်ဆီတွင် ရောဂါ လက္ခဏာ တစ်ခုခုများ ရှိနေသည်ဟု စိုးရိမ်မိပါက ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင် သင့်ပါသည်။
အောက်ပါတို့မှ တစ်ခုခုရှိပါက ဆရာဝန်နှင့် ဆက်သွယ် သင့်ပါသည်။
ကလေးဘဝတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးခြင်း။
သင့်သားသည် အခြား ကောင်လေးများထက် ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးပုံပေါ်ပါက သင့်သားကို ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
Klinefelter’s syndrome ၏ အဖြစ်များသော ရောဂါ လက္ခဏာများ ရှိခြင်း။
ရင်သား တစ်ရှူးများ ကြီးခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါများ သေးခြင်း နှင့် ဝှေးစေ့ သေးခြင်း မာခြင်း တို့ ပါဝင်သည်။
အကာအကွယ် မသုံးဘဲ ပုံမှန် လိင်ဆက်ဆံရင်း တစ်နှစ်ကျော်သည် အထိ သင့်ကြင် ဖော်သည် ကိုယ်ဝန်မရပါက ဆရာဝန်အား သွား ရောက်ပြသပါ။ မျိုးမအောင်ခြင်းသည် Klinefelter’s syndrome ထက် အခြား တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် ဖြစ် နိုင်သည်။ သို့သော် အမျိုးသားအများစုသည် ဖခင် မဖြစ်နိုင်မှန်း သိကာမှ ရောဂါရှိကြောင်း သိရှိကြသည်။
သင့်ဆီတွင် အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေပါက သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေပါက ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
လူတိုင်း၏ ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှု သည် မတူညီနိုင်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်း သည် သင်၏အခြေအနေ ကောင်းမွန်ရန် အတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသည်။
Klinefelter’s Syndrome ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းသည် လိင် ခရိုမိုဆုန်းများ တွင် ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန် အမျိုးသမီးများတွင် 46,XX ဟူသော ခရိုမိုဆုန်း ပုံစံရှိသည်။ ပုံမှန်အမျိုးသားများ တွင် 46,XY ပုံစံရှိသည်။
ထိုရောဂါတွင် 47,XXY ပုံစံဖြစ်သည်။ ထိုအပိုပါသော X ခရိုမိုဆုန်းသည် သားအိမ်အတွင်းနှင့် အရွယ် ရောက်ချိန်တွင် ဖြစ်သော ပုံမှန် အမျိုးသား လိင် ဖွံ့ဖြိုး မှုများကို နှောင့်ယှက်ပါသည်။
Klinefelter’s Syndrome ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Klinefelter’s syndrome ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသော အ ချက်များစွာ ရှိပါသည်။ ဥပမာ-
Klinefelter’s syndrome သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော မျိုးဗီဇ ဖြစ်စဉ်များ ကြောင့် ဖြစ်ပွားပါသည်။ Klinefelter’s syndrome ဖြင့် ကလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားနိုင်ချေကို မိဘမှ ပြုလုပ်ခြင်း မပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မတိုးမြှင့်နိုင်ပါ။ အသက်ကြီးသော မိခင်များ တွင်မူ ဖြစ်နိုင်ချေသည် အနည်းငယ် မြင့်နိုင်ပါသည်။
Klinefelter’s Syndrome ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်သည် ပုံမှန် မဖွံ့ဖြိုးသော ယောက်ျားလေးအား ခန္ဓါကိုယ် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရောဂါအဖြေရှာနိုင်ပါ သည်။ ပါးစပ်တွင်းရှိ ဆဲလ်များကို ယူ၍ ခရိုမိုဆုန်းများ စစ်ဆေး မှုသည် ခရိုမိုဆုန်း အရေအတွက်နှင့် အမျိုးအစားကို သိနိုင် သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကလေးမရခြင်းကြောင့် ဆရာဝန်အား လာရောက်ပြသကြသည်။
သွေးစစ်မှုတွင် ကျားဟော်မုန်းများ နည်းနေပြီး အခြားဟော်မုန်းဖြစ်သော follicle-stimulating hormone (FSH) များနေသည်ကို တွေ့ရမည်။
Klinefelter’s Syndrome ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
မျိုးမအောင်ခြင်းကို ကုသ၍ မရပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် ဝှေးစေ့များသည် သုတ်ကောင်ကို မထုတ်လုပ်နိုင်သော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျားဟော်မုန်း အစားထိုးခြင်းသည် အမျိုး သား လိင်ပေါင်းဆိုင်ရာ ဝိသေသများပေါ်ရန် ကူညီနိုင်သည်။
ကျားဟော်မုန်းကို ထိုးဆေး သို့မဟုတ် အရေပြားပေါ်တွင် ကပ်ခြင်း ဖြင့် ပေးနိုင်ပြီး ပုံမှန် အမျိုးသားကြွက်သား ဖွံဖြိုးမှု နှင့် အမွေးပေါက်မှု (မုတ်ဆိတ်မွေး၊ ချိုင်းမွေး၊ လိင်အင်္ဂါမွေး) များကို ဖြစ်စေသည်။
ကျားဟော်မုန်း ပိုလျှံစွာ များခြင်းသည် စိတ်နေစိတ်ထား ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဒေါသထွက်လွယ်ခြင်း၊ ပုံမှန် မဟုတ်စွာ သုတ်ရည်ဂလန်း ကြီးထွားခြင်း၊ သွေးပေါင်တက် ခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။ ကျားဟော်မုန်း အရေပြားကပ် သည့်အပြားများ အသုံးပြုခြင်းသည် အရေပြား ဓါတ်ပြုမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
အမျိုးသမီးကဲ့သို့ ရင်သားကြီးခြင်းကို ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။ ရင်သားအတွင်းရှိ အလုံးကို ရင်သားကင် ဆာအတွက် စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။
အရိုးပွခြင်းကို ကျားဟော်မုန်းနှင့် ကယ်စီယမ်၊ ဗီတာမင် ဒီ ပေါင်းပေးခြင်းနှင့် ပုံမှန် အလေးမ လေ့ကျင့်ခန်းများ လုပ်ခြင်း ဖြင့် ကုသနိုင်ပါသည်။
လူနေမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများ အသုံးပြုခြင်း သည် Klinefelter’s syndrome ကို ကုသရာတွင် ဘယ်လို အထောက် အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုပုံစံများ နှင့် အိမ်သုံး ကုထုံးများ သည် Klinefelter’s syndrome ကို ထိန်းချုပ်နိုင် ပါသည်။
ယောက်ျား လိင် ဖွံ့ဖြိုးမှု လုပ်ငန်းများ အကြောင်း သတိပြုမိပါက ဟော်မုန်းဗေဒ အထူးကု ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
ရင်သားဖွံ့ဖြိုးခြင်းသည် အနှောင့်အယှက်ပေးပါက သို့မဟုတ် ရင်သားတွင် အလုံးတွေ့ပါက ခွဲစိတ်ဆရာ ဝန်နှင့် ပြသပါ။
ကျားဟော်မုန်း အစားထိုးခြင်းဖြင့် ပြင်းထန်စွာ စိတ် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
ကျော၊ ခါး၊ လက်ကောက်ဝတ် သို့မဟုတ် နံရိုးတွင် ရုတ်တရက် အရိုးနာခြင်းဖြစ်ပါက ဆရာဝန်အား ပြောပါ။
ကျားဟော်မုန်း အရေပြားကပ်ဆေးများ သုံးစဉ် အဖု အပိမ့်များထွက်လာပါက ဆရာဝန်အား အကြောင်း ကြားပါ။
အရေပြား ယားယံနာကျင်ခြင်း မဖြစ်အောင် ကျားဟော်မုန်း အရေပြားကပ်ဆေးကို အရေပြားတစ် နေရာတည်းတွင် အကြိမ်များစွာ မကပ်ပါနှင့်။ နေရာ ပြောင်း၍ ကပ်ပါ။
Klinefelter’s syndrome ရှိသော အခြားသူများမှ လေ့လာ ဆွေးနွေးလိုပါက ထောက်ပံ့မှုအဖွဲ့များအ ကြောင်း ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
Advisor.Philadelphia, PA: Saunders /Elsevier,
2012.Print Version 207
Accessed September 22,2015
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P.,& Albert,
R. K. (2009).The Merck manual home health
handbook.Whitehouse Station, NJ, Merck Research
Laboratories. Print Version. Page 1729.Ferri, Fred.Ferri’s Netter Patient
Laboratories. Print Version. Page 1729.